‘राष्ट्रपतिज्यू, संविधान कहाँ छ ?’ (फोटो फिचर) - Kohalpur Trends
‘राष्ट्रपतिज्यू, संविधान कहाँ छ ?’ (फोटो फिचर)
trendsminad February 5, 2021	No Comments
२३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समाजले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
शुक्रबार प्रतिगमनविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले लैनचौरदेखि शीतलनिवाससम्म प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागी नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रपतिज्यू संविधान कहाँ छ ? असंवैधानिक नियुक्ति मान्दैनौं, सत्ता कब्जा मुर्दावाद लगायतको नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरिए आगामी कुनै संसदले पनि पाँच वर्षको आयु देख्न नपाउने बताए । सबै संसद गुलेलीको शिकार हुने उनको भनाइ छ ।
संविधानलाई कार्यकारीले व्याख्या गर्ने र कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुने उल्टो दिशामा देश जान लागेको उनले बताए । हुकुमी शासनलाई जरैबाट खतम पार्न नागरिकहरु सडकमा आएको श्रेष्ठले बताए ।
राजनीतिक बिश्लेषक कृष्ण खनालले न्यायालय संविधान उल्लंघनको साक्षी बसिरहेको आरोप लगाए । कानुनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाउनेले मात्रै रक्षा गर्ने नभई नागरिकले पनि संविधानको रक्षा गर्ने उनको भनाइ छ । नागरिकहरु सडकमा नउभिउञ्जेल संविधान नजोगिने उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको बिरोधमा प्लेकार्ड प्रदर्शन भएका थिए भने नाराबाजी समेत भएको थियो । लैनचौरबाट सुरु भएको प्रदर्शनलाई राष्ट्रपति भवन पुग्न नदिइएपछि पानीपोखरीमा कोण सभा गरिएको थियो ।
Previous Previous post: राष्ट्रपतिद्वारा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी
Next Next post: अपरेशन खैरीकोट, सात हतियार सहित नौ जना सेनाको फन्दामा
१३ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाको फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए) का विशेषज्ञहरुले जोन्सन एण्ड जोन्सनले विकास गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी…
‘सबको फोन’ : व्यवसायसँगै विद्युत्तीय फोहोर व्यवस्थापन
१३ फागुन, काठमाडौं । ‘सबको फोन…’ गत दुई वर्षदेखि बाक्लै सुन्न थालिएको एउटा कम्पनीको नाम हो, यो । ‘सबको फोन’ले बिग्रेको मोबाइल सेटलाई ‘रिफरविस्ट’ गर्छ…
बढ्यो पेट्रोलियम तस्करी
नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महंगिए पछि तस्करी बढेको छ । खुला सीमाना रहेकाले स–सानो परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी हुने गरेको छ । नेपाल–भारत सीमाको…
Falgun _13_ 2077
The publish Falgun _13_ 2077 appeared first on Nepalgunj News. Source link Share via:0More